စွန့်ကိ - ဝီကီပီးဒီးယား
(စွန့်ကိ (အဆိုတော်) မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ဤ ဆောင်းပါးသည် မည်သည့် ကျမ်းညွှန်း (သို့) အကိုးအကား ကိုမှ ရည်ညွှန်းထားခြင်းမရှိပေ။ ကျေးဇူးပြုပြီး စိတ်ချယုံကြည်နိုင်လောက်သော အချက်အလက်ရင်းမြစ် များကို ကိုးကားရည်ညွှန်း၍ ဤဆောင်းပါးကို မွမ်းမံ ပေးပါ။ အကိုးအကားမပါသော အချက်အလက်များသည် စောဒကတက်ခြင်းခံရနိုင်ပြီး ဖယ်ရှားခြင်းပါခံရမည်ဖြစ်သည်။ (၁၆ ဇွန်လ ၂၀၁၉)
(1994-02-20) ၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၁၉၉၄ (အသက် ၂၆)
ဤ ဆောင်းပါး contains คัง ซึล-กี (th.wikipedia) မှ ဘာသာပြန်ထားမှုများ ပါဝင်သည်။
စွန့်ကိ (အင်္ဂလိပ်: Seulgi, ကိုရီးယား: 강슬기) များမှတောင်ကိုရီးယား အဆိုတော်မျာ မှာမွေးဖွား ၂၀ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၉၉၄ မိန်းကလေးအုပ်စုတစ်စု၏တစ်ဦးကလူသိများတဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး။ ရေဒဝေလဝေတ (အင်္ဂလိပ်: Red Velvet)
2017 - Idol Drama Operation Team
2018 - Law of the Jungle in Mexico
2018 - Cool Kids
2015 - SMTown: The Stage
2014 - School Oz
↑ Choi Jin-sil (August 8, 2014)။ 8월의 특급 루키 소개서 ① 레드벨벳 (in Korean)။ October 29, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sohn Ji-young (July 28, 2014)။ SM Entertainment debuts new girl group Red Velvet။ The Korea Herald။ October 29, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ '요즘애들', 유재석의 인싸댄스…공식 포스터 공개
↑ http://entertain.naver.com/read?oid=311&aid=0000493101 'SM타운' 공연실황 다큐, 8월13일 국내개봉 확정]
↑ Lee Eun Jin. ‘태양의 후예’ 레드벨벳, 위문공연에 깜짝 등장…송중기-진구 ‘환호’ Ten Asia, 14. huhtikuu 2016. 20. huhtikuu 2019.
↑ TVXQ, SHINee, EXO, f(x) to star in hologram musical 'School OZ'
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စွန့်ကိ&oldid=502713" မှ ရယူရန်
၁၆ ဇွန်လ ၂၀၁၉ မှ အကိုးအကား မပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
Articles containing ကိုရီးယားဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၀၄:၃၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။